‘सह’वासलाई भरपुर आन’न्दित तुल्या’उनको ला’गि आब’स्यक १० फर्मुलाहरु “ – Krazy NepaL
‘सह’वासलाई भरपुर आन’न्दित तुल्या’उनको ला’गि आब’स्यक १० फर्मुलाहरु “
November 18, 2020 521
हरेकलाई स’हवास गर्ने चाहना अधिक रहेको’ हुन्छ । मानव समाजका वि’विध क्रियाकलाप अहिले छिटो–छिटो परिवर्तन भइरहेका छन् । महिलाहरुमा स’हवास गर्ने चाहना र शैलीमा पनि परिवर्तन भइरहेको छ । महिलासँग सह’वास गर्दा कतिपय अवस्थामा पुरुषले चाहेर पनि पूर्ण स’न्तुष्टि दिन सकिरहेका हुँदैनन् । यसो भएको खण्डमा दुवैको जीवनमा तना-व र अवरोधहरु उत्पन्न हुन सक्छन् ।
यौ-न स्वास्थ्य र यससम्बन्धी व्यवहारका बारे”मा अमेरिकाको नेसनल सेन्टर फर हेल्थ स्टाटिस्टिक्सले हालै मात्र करिब ३ लाख महिलाहरुबीच सर्वेक्षण’ गरेको थियो । यस सर्वेक्षणपछि उक्त संस्थाले सो स’म्बन्धमा रोचक’ कुरा बा’हिर ल्याएको छ ।
सो सर्वेक्षण प्रतिवेद’नअनुसार यौ-न’स-म्पर्कको बेला महिलाहरु अनौठो सहवास व्यव’हार र ह-र्कत गर्न मन पराउने हुन्छन् । साथै सहवासका बेला नयाँ–नयाँ यौ-न आ-सनको परीक्षण गर्न मन” पराउने गर्छन् । सह’वासका समयमा गरिएका अघिल्ला क्रियाकलापभन्दा प’छिल्ला क्रि’याकलापमा व्यापक भिन्नता एवं फरकपन चाहन्छन् भन्ने कुरा उक्त अनुसन्धान प्रतिवेदनको सारमा उल्लेख गरिएको छ ।
उक्त सर्वेक्षणमा यौ-नस-म्पर्कको बेला युवतीहरु के सोच्छन् ? पुरुषले के गरेको मन पर्छ ? कस्तो खालको आ-सन मन पर्दछ, अनि सहवासमा के कुराले सन्तुष्ट तुल्याउँछ ? भन्ने जस्ता सहवास’सँग सम्बन्धित’ विवि’ध प्रश्नहरु ”सोधिएको ‘थियो । यी विविध प्रश्नहरु सोधेर प्राप्त गरिएका विविध ”किसिम’का जवाफहरुको निष्कर्षस्वरुप सो संस्थाले १० वटा महत्वपूर्ण बुँदाहरु तथा फर्मुला तयार गरेको छ । यी फर्मुलाहरु वयष्कहरुको यौ-नजीवन सफल बनाउनका लागि उपयोगी हुन सक्ने मनसायले संक्षेपमा यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
जिस्किएर नि-र्वस्त्र पार्ने
सह वासको पहिलो दिनमा युवतीहरु कपडा खोल्न लजालु हुन सक्छन् । तर हरेक युवतीको चाहना यो हुन्छ कि पुरुषले हल्का जिस्किएर उनीहरुको आकर्षक भाग स्त-न र कम्मरभन्दा’ मुनि हेरेर स्पर्श गरिदेओ’स् र बिस्तारै ‘भित्री व ‘स्त्रहरु खोलिदेओस् । उक्त सर्वेक्षणमा सम्लग्न भएका विशेष गरी अग्लो हिल जुत्ता लगाउने र से-क्सी गाउन लगाउने युवतीहरुले यस्तो गरेको मन पर्ने बताएका थिए ।
यौ-न व्यवहारमा परिवर्तन
यौ-नस-म्बन्धलाई अझ रोचक र ताजा बनाउनको लागि सह वासको बेला आफ्नो पुरुष ‘पार्टनरले अलिकति ‘छा-डा र जंगली व्यवहार गरेको मन पर्ने बताए ‘। पुरुषको य”स्तो व्यवहारका का’रण दुवैलाई आनन्द प्राप्त गर्न बढी सहयोगी हुने युवतीहरुले सर्वेक्षणका क्रममा गो-प्यरुपमा खुलाए ।
यौ-न आस-न परिवर्तन
युवतीहरु यौ-नस-म्पर्कको बेला च-रम यौ-नस न्तुष्टि प्राप्त गर्न खोज्छन् तर यो प्राप्त गर्नका लागि पुरुषले नै प्रमुख जिम्मेवारी निर्वाह गरोस् भन्ने उनीहरुको चाह ना हुन्छ । प्रत्येकपटकको यौ-नस-म्पर्कमा पुरुषले ‘के तिमी पू’र्णरुपले स-न्तुष्ट छौ ?’ भन्ने जस्ता प्रश्न सोधिदिऊन् भन्ने उनीहरु सोचिरहेका हुन्छन् । यदि सन्तुष्टि छैन भन्ने ज’वाफ आएमा पहिलोचोटि युवतीको इच्छाअनुसार पुरुषले यौ-न आ-सन’ परिवर्तन गर्नुपर्छ । दो’स्रो पटकमा पुरुषको चाहनाअनुसार यौ-नसम्प-र्क गरे दुवैलाई आनन्द प्राप्त गर्न सकिन्छ । यो कुरा युवतीहरुले सर्वेक्षणका क्रममा भनेको आधारमा तयार गरिएको हो ।
युवतीको जीउ सु-मसुम्याउने
करिब ७० प्रतिशत युवतीहरुले यौ-नस-म्पर्कको बेला आफ्नो यौ न पा र्टनरले शुरुमा स्त-न र कम्मरमुनिको अंग सुमसुम्याउँदै प्रा-कक्रि-या गरेको मन पर्ने बताएका छन् । यसपछि मात्र युवतीहरुमा बिस्तारै यौ-न उत्ते-जना बढ्छ । यसो गर्दै जाँदा रक्तसञ्चार बढ्दै जान थाल्छ । साथै यसले गर्दा यो-निको भित्ताहरुबाट चिल्लो रस निस्कन्छ र यौ-नस-म्पर्कको लागि तयार हुन्छ । यस्तो बेला पुरुष अं-ग स्त्री अं-गमा प्रवेश गराउँदा युवतीहरुलाई पी-डा हुँदैन । अलिकति पी डा भए पनि उनीहरु आँखा चिम्लेर शान्तिसँग बसी आ नन्द लिने गरेको सर्वेक्षणबाट देखिएको छ ।
धेरैजसो युवतीलाई बाथ’रुममा नि-र्वस्त्र भएर नुहाउँदै सहवास गर्दा बढी ”आनन्द आउने कुरा’ उक्त अनुसन्धानबाट थाहा हुन आएको छ । युवतीहरुलाई बाथरुममा गएर ‘यौ-नक्री’डा गर्ने कार्य निकै मनोरञ्जनपूर्ण हुने र स्वर्गीय आनन्दको अनुभूति हुने गरेको युवतीहरुले उक्त सर्वेक्षणका क्रममा बताएका थिए ।
रज’श्वला हुनुभन्दा अघि र पछि यौ-न आ-नन्द
७० प्रतिशत युवतीहरुले रज-श्वला हुनु २ दिनअगाडि र रज-श्वला भएको पाँचौं दिनदेखि उनीहरुमा अ”त्यधिक यौ-नचाह-ना हुने गरेको सो अनुसन्धानको ‘क्रममा बताएका थिए । सर्वेक्षणमा रज-श्वला हुनु”भन्दा अघि यौ-नलाई उ-त्तेजित पार्ने ह र्मोनहरु निकै सक्रिय हुन्छन् । यो अवस्थामा यौ-नस-म्पर्क गर्दा युवतीहरुमा च-रम आ नन्दको अनुभव हुने गर्छ ।
अरुले अश्ली-ल सोचोस् या नसोचोस्, आफुले मन पराएको पुरुषसँग जंगल, नदी र तालको छेउछाउमा खुल्लारुपमा यौ-नस-म्पर्क गर्ने युवतीहरुको ”भित्री चाहना हुने गरेको सो अध्ययनले देखाएको छ । अझ यस्तो खुल्ला ठाउँमा यौ-नसम्प-र्क गर्दागर्दै झमझम पानी परेको खण्डमा झन् च’न्द्रमाको यात्रा गरेसरह आ नन्द आउने गरेको युवतीहरुले ‘बताएका छन् । यस अवस्थामा बढी उ-त्तेजित हुने र स हवासका बेला तृप्त हुने गरेको उनीहरुले’ बताएका छन् ।
महिलाहरुबीचको समलिं-गी सम्पर्क
युवतीहरु पुरुषसँग मात्र हैन कि महिला–महिलाबीचमा पनि यौ-नस-म्पर्कको चाहना राख्ने गर्छन् । महिनाको एकचोटि आफ्नो नजिकको साथीसँग यौ-नसम्प-र्क गर्न पाए हुन्थ्यो भनी उनीहरु सधैँ सोचिरहन्छन् ।
यौ-नस-म्पर्क छिटो सम्पन्न नगर्ने
अधिकांश पुरुषहरु स हवासका बेला वी-र्य स्ख-लित भएपछि आन न्द प्राप्त गर्छन् । त्यसैले छिटो–छिटो यौ-नस-म्पर्क गरी आत्मसन्तुष्टि लिन खोज्छन् । सर्वेक्षणका क्रममा सहभागी युवतीहरुको भनाइमा यो प्रक्रिया पूरै ग ल’त हो । पुरुषको वी-र्य स्ख-लनपछि पनि केही ”मिनेट पुरुषको अं-ग महिलाको अं-गभित्र नै हुनु ठी’क हुने युवतीहरुले सर्वेक्षणका क्रममा बताएका थिए । यसो गरेको खण्डमा यो-निको मांसपेशी सामान्य अवस्था’मा आउने हुन्छ र युवतीले चर-म यौ-नआन-न्द प्राप्त गर्ने हुन्छन् ।
यौ-नमा वा इन
यौ-नस-म्पर्क’को क्रममा पुरु’षले आफूहरुलाई माया ‘गरेर एक–दुई पेग वा ‘इन से वन गराएको खण्ड’मा यौ-नका र्यमा तीव्रता आउने र सबै ‘पी-डा भुल्ने गरेको सर्वेक्षणका क्रममा युवतीहरुले बताएका छन् । यस्तो क्षणमा ‘पाइने’ यौ-नस-‘न्तुष्टि अरु दिनको तुलनमा निकै सुख’द हुने गरेको’ सर्वेक्षणमा उनीहरुले बताए’का छन् । सो’ अवस्थामा वाइनले म ‘स्तिष्कमा कस्तो’ तरंग पैदा गर्छ भनेर अनुसन्धान ‘पनि गरिएको उल्लेख छ । तर निरन्तार धेरै सेवन चाँहि हा निका’रक हुने बिभि’न्न अध्यय’नबाट देखिएको छ ।
प्रस्तुती- हिक्मत डंगोल/साधना म्यागजिन
*******************भीडीयो तलको लिंकमा रहेको छ ************
Posted in मनोरंजन, रोचक, स्वास्थ्य /जिबनशैली
Prev“सचिवालयका नौ जनाले नै सामूहिक राजीनामा दिएर नयाँ नेतृत्व तयार पार्नुपर्ने नेकपाका महासचिव पौडेलको प्रस्ताव”
Next“अत्याधिक से’क्सी देखिएको भन्दै यी नायिका’लाई सर’कारले लगायो प्रतिब’न्ध(हेर्नुहोस तस्विर सहित)”
कुन रा’शीका व्यक्तिको भा’ग्य कस्तो ? भा’ग्य चम्का’उन अपनाउनुहोस् यी उपाय-: